आज मिति २०७७, मंसिर ८ गते सोमबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित) – Nepali news portal
प्रवासी नेपाली एकता मंच समबन्य समिति द्धारा प्रबासमा रहेका नेता,कार्यक्रता तथा नेपाली श्रमजीबी हरुसंगअन्तरक्रिया सम्पन्न ! अन्जु पन्तको संगितमा ‘धेरै माया नदेउ मलाई बजार मा ! ओलीको चाहना पूरा गर्दा राष्ट्रपति पनि विवादमा बैङ्कहरुले ल्याए नयाँ ब्याज दर आज मिति २०७७, पुस १ गते बुधबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
८ मंसिर २०७७, सोमबार ०८:२४ November 23, 2020 काठमाडौं डेष्क
मेष : धार्मिक र आध्यात्मिक चासोको पालना गर्ने आज पनि एउटा राम्रो दिन हो। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। आफ्नो प्रेमीसँग बदला लिने हुँदा कुनै पनि परिणाम प्राप्त हुँदैन – बरु तपाईंले शान्तिसँग आफ्नो प्रेमीसँग आफ्नो साँचो भावना पोख्नु पर्छ। तपाईंले लामो समयदेखि काम गरिरहेको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनामा ढिलाइ भएको छ। तपाईंको चुम्बकीय व्यक्तित्वले तपाईंलाई उज्यालोमा राख्नेछ। तपाईंले आफ्नो जोडीको कुनै काम बारे अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्नु हुनेछ। तर पछि यसलाई राम्रोको लागि भएको हो भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
वृष : आज स्वास्थ्य ठीक हुनेछ। तपाईंको जोडीसँग आफ्नो गोप्य जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सोच्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने नभन्नुहोस् किनकि उनले अरू कसैलाई यो कुरा भन्न सक्छिन्। आफ्नो क्यारियरको आशा बढाउनको लागि आफ्नो व्यावसायिक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रमा असीमित सफलता पाउने सम्भावना छ। धेरै फाइला पाउन आफ्नो सबै कौशल लगाउनुहोस्। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवन नीरस भएको पाउन सक्नुहुनेछ। केही खुशी मनाउनुहोस्।
मिथुन : अनावश्यक तनाउ र चिन्ताले तपाईंका जीवनको रस चुसेर र तपाईंलाई सुक्खा पार्न सक्छ। यिनीहरूबाट उन्मुक्ति पाउनु राम्रो हुनेछ अन्यथा यिनीहरूले मात्र तपाईंको समस्या बढाउन सक्छन्। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। रोमान्स रोमाञ्चक हुनेछ – त्यसैले तपाईंलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र दिनलाई उत्तम बनाउनुहोस्। संयुक्त उद्यम र भागीदारीबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
कर्कट : तपाईंसँग प्रशस्त ऊर्जा हुनेछ – तर कामको दबावले तपाईंलाई रिस उठ्नेछ। धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। आवश्यक परेमा मित्रहरूले तपाईंको सहायता गर्नेछन्। प्रेमको खुशीयाली अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। सेवकहरू – सहकर्मी र सह-कामदारहरूको समस्यालाई छोड्नु सकिंदैन। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
सिंह : कुनै हटाउन नसकिने परिस्थितिले केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। तर तपाईंले आफ्नो समतोलन राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ र समस्याको समयाधान गर्ने तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। शारीरिक अस्तित्व अब तपाईंको लागि केही होइन, किनकि तपाईंलाई हरेक समय एक-अर्काका प्रेममा आफैलाई महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंका साझेदारहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार काम गरेनन् भने आहत हुनु आवश्यक छैन – तपाईंले तिनीहरूसँग त्यस विषयमा राम्रोसँग कुरा गर्नु आवश्यक छ। आफ्नो जोडीसँग आज आफ्नो जीवनको सबैभन्दा रोमान्टिक दिन हुन गइरहेको छ।
कन्या : तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। आज तपाईंको प्रेम साझेदारले तपाईंलाई केही साँच्चै सुन्दर वस्तु दिनेछ। आफ्नो कामको दक्षतामा वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधीमा बानी बसाल्नुहोस् – तपाईंको शैली र राम्ररी काम गर्ने अद्वितीय तरीकाले तपाईंलाई छेउबाट हेर्दै गरेका मानिसहरूलाई चासोको विषय हुनेछ। आँखाले सबै कुरा भन्छ, र आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित आँखा जुदाएर भावनात्मक बातचीत गर्नु हुनेछ।
तुला : एउटा मित्रले तपाईंको खुल्ला मन र सहिष्णुता शक्तिको परीक्षण गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो मान आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन र हरेक निर्णयमा तर्कसङ्गत हुन होसियार हुनुपर्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। आफ्नी प्रेमीकाको उट्पट्याङ्ग व्यवहारले तपाईंको मुड उदास बनाउन सक्छ। कुनै पनि साझेदारी गर्नु अघि आफ्नो भित्री भावनालाई ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ; धैर्य नगुमाउनुहोस्।
वृश्चिक : परिवारको चिकित्सा खर्चमा भएको वृद्धि हटाउन सकिंदैन। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो सफलता र आनन्द ल्याउने उत्तम समय हो – तपाईंको प्रयास र तपाईंका परिवारका सदस्यहरूद्वारा प्रदान गरिएको सहायताको लागि धन्यवाद। हृदय नगुमाउनुहोस् – असफलता एकदम प्राकृतिक हो र तिनीहरू नै जीवनका सौन्दर्य हुन्। वैवाहिक जीवनले केही नराम्रो प्रभाव लिएर आउँछ; तपाईंले आज यसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
धनु : जुन तपाईंसँग कहिल्यै आउँदैन। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। तपाईंकी प्रिया केही रिसाएको जस्तो हुनेछिन् जसले तपाईंलाई दबाब थपिनेछ। आज उँचो प्रदर्शन र उँचो प्रोफाइलको लागि दिन हो। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवन नीरस भएको पाउन सक्नुहुनेछ। केही खुशी मनाउनुहोस्।
मकर : आफ्नो वजनमा ध्यान दिनुहोस् र धेर नखानुहोस्। शंकास्पद वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट सावधान रहनुहोस्। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। तपाईंले जे गरे पनि सिद्ध हुनुहुनेछ – तपाईंले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूलाई आफु कति कुशल हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। कुनै बाह्य पक्षले तपाईं र तपाईंको जोडी बीच मतभेद सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सक्छ, तर तपाईंहरू दुवैले यसलाई समाधान गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। आफन्त र साथीहरूबाट अप्रत्याशित उपहार र इनामहरू। तपाईंको झ्यालमा फूल राखेर आफ्नो प्रेम देखाउनुहोस्। आफ्नो कौशल देखाउन अवसर आज तपाईंसँग हुनेछ। तपाईंको जोडीले आज तपाईंको लागि साँच्चै विशेष कुरा गर्नेछन्।
मीन : तपाईँको अरूलाई आलोचना गर्ने बानीले स्वयं केही आलोचनाको सामना गर्नु पर्ने सम्भावना छ। आफ्नो हँसीखुशीलाई माथि र प्रतिरक्षालाई तल राख्नुहोस् र यसले तपाईंलाई अप्रकट टिप्पणीबाट मुक्त हुने राम्रो अवसर दिनेछ। लगानीको लागि सिफारिस गरिन्छ तर उचित सल्लाह लिनु आवश्यक छ। आफ्नी प्रियतमासंगको तपाईंको लापरवाह व्यवहारले घरमा परेशानी ल्याउन सक्छ। तपाईंको जोडीलाई तपाईंको पुरानो गोप्य कुरा थाहा लाग्नाले केही चोट पर्न सक्छ।
आज ३३६ जना कोरोना संक्रमित, २२६ डिस्चार्ज, ४ को मृत्यु
कोरोनाको खोप काठमाण्डौं आईपुग्यो
फोहोरलाई मोहोर बनाउने अभियानमा विद्यार्थी
संसद विघटनविरुद्ध काँग्रेसले देशभरीमा प्रदर्शन गर्ने
जवाफ पठाएको साता नाघिसक्यो, आयोगलाई निर्णय दिन सकस
थप ५६९९ जना कोरोना मुक्त,१६ को मृत्यु
गौतमको ढुलमुले चरित्रले ओली र प्रचण्डको तानातानमा थापा
राजनीति के का लागि ?
ओलीले वडाध्यक्ष हुन पनि नसुहाउने मानिसलाई मन्त्री बनाएको छ - ओम शर्मा
‘ओलीलाई घिसारेर सत्ताबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ’